Maitiro eKujoinha Yeruzhinji NoPixel GTA RP Server: Nhanho nhanho Inotungamira Yekutamba Grand Kuba Auto Pamhepo | la-manette.com
Maitiro ekujoinha Veruzhinji NoPixel GTA RP Server: Nhanho nhanho Inotungamira Yekutamba Grand Theft Auto Online
29 novembre 2021 ndima Anais Fontaine
Sezvo Grand Theft Auto RPG chiitiko chakaona kuwedzera kunoshamisa kwevataridzi paTwitch nekuda kwevanoyerera vakaita se. XQC, Sykkuno nevamwe, chido chekutora chikamu chakawedzerawo.
Nehurombo, hazvigoneke kuchena iyo main server (kunze kwekunge uri Twitch mutambi mukuru kana uchida kupa uye kumirira). Neraki, NoPixel yakagadzira yechipiri sevha yeruzhinji iyo vamwe vanogona kujoina. Kunyanya, XQC yakabatana neruzhinji server mushure mekurambidzwa kwayo zvachose pane whitelist server.
Asi XQC haisiriyo yega yakabatana neserver. Mamwe akawanda ma streamer kubva ku whitelisted server akabatana nepublic server nguva nenguva, zvichipa kuvimbika kwakawanda. Mune dzidziso, saka, iwe unogona kujoinha iyo yeruzhinji NoPixel server uye kutamba nevamwe vako vaunofarira streamers. Kunyangwe iwe usingafanire kuedza kuvatora kumhanyira, nekuti ichakuwana iwe nekukurumidza kurambidzwa kubva kune server.
Kunyangwe iwe uchida kuyedza hunyanzvi hwako hwekutamba-yekutamba kana kuyedza kusangana neyako yaunofarira streamer, isu tinokufambisa iwe nzira yekujoinha NoPixel's public server pazasi.
Ini ndinojoinha sei NoPixel's GTA RP public server?
Dhawunirodha GTA 5 pakombuta yako
Dhawunirodha iyo Mod FiveM
Gadzira account yeNoPixel
Batanidza kune yeruzhinji server
Mirira mumutsara wakareba
Tamba pane server
Maitiro ekujoinha NoPixel's public server yeGTA RP yakatwasuka, kunyanya kana iwe uchitova wega mutambo pakombuta yako. Iyi sevha haisi kuwanikwa yekutamba pane console sezvo iwe uchifanira kuwedzera iyo FiveM mod kuti ukwanise kutamba.
Verenga zvakare: 5 yakanakisa VR zombie mitambo yekusimba uye kusimba
Iyo yakaderera yekuyedza kutamba pane sevha ndeyekuti iwe unofanirwa kumirira mumitsetse mirefu. Sekutaura kwakaita Reddit mushandisi R4nd0mnumbrz, kune vanhu vazhinji vari kuyedza kujoinha sevha panguva imwe chete. Uye vamwe vakaratidza kuti nhamba yevanhu yakatopfuura zviuru zviviri pane dzimwe nguva.
Kunyangwe nhamba idzi dzakatanga kubva pakatangwa sevha yeruzhinji uye nguva dzekumirira dzakadzikama kubvira. Asi kumirira kunoramba kwenguva refu kune avo vasina pekutangira.
NoPixel GTA RP yeruzhinji server tier mitengo
Chikamu 1 - 30
Chikamu 2 - 100
Chikamu 3 - 250
Chikamu 4 - 500
Kana iwe usingade kumirira mumitsetse mirefu, unogona kubhadhara kuti usvike pamusoro peiyo yekutanga rondedzero.
Sezvo Reddit mushandisi jjhassert akacherekedza, kune akasiyana tiers (ona pamusoro) kune vashandisi vanoda kubhadhara kuti vasvetuke mitsetse mirefu. Kunyange zvazvo, sezvinoratidzwa nechitoro cheNoPixel, uku kunyoreswa, izvo zvinoreva kuti haisi nguva imwe chete yekubhadhara, asi kubhadhara pamwedzi.
Dev Mari yeruzhinji server yeNoPixel GTA RP
Sevha yeruzhinji inopa chimwe chinhu chinodaidzwa kuti Dev Coins, kuchinjana kwemari chaiyo pamari yemutambo.Chitoro chinoyambira kuti "kukosha kweDev Coins kunogona kushanduka". Asi maererano neiyo jjhassert's Reddit post, madhora zana mumari chaiyo anowana makumi mapfumbamwe Dev Coins. Uye 100 Dev Coin yakaenzana nemadhora chiuru mumari yemutambo.Saka, zana remadhora mumari chaiyo raizokuwana 90 mumari yemutambo zvichibva pamusika uyu.
Verenga zvakare: Maitiro ekumanikidza kutangazve iPhone kana iPad (inoshanda kune ese mamodheru)
Chii chinonzi NoPixel GTA RP public server?
Iyo yeruzhinji NoPixel server yakagadzirwa seimwe sevhavha mushure meiyo huru yakanyorwa sevha yakawedzera mukurumbira. Iyo NoPixel sevha yave iripo kwemakore mashoma, kunyangwe iyo yakacheneswa sevha inotamba nevazhinji inoridza inotorwa seNoPixel 3.0 nekuti ndiyo yechitatu iteration yeserver.
Iyo yeruzhinji server inobvumira chero munhu kuti ajoine iyo, iyo ine zvakanakira nezvayakaipira. Chakanakira bhenefiti ndechekuti inobvumira vanhu vatsva kuti vatambe pavasingakwanise kujoinha iyo yakacheneswa server. Vanhu vazhinji vanofarira kutamba-yekutamba uye havana vateereri veTwitch yekutendeukira kwavari.
The downside iri pachena. Sezvo chero munhu achigona kusaina, kune vanhu vanouya kuzopfura kana kuita chimwe chinhu chakapusa. Neraki, zviri nyore kumisa vashandisi ava mumutambo uye kuita kuti varambidzwe.
Ndiani ari kutamba paNoPixel GTA RP public server?
XQC ingangove ndiro zita hombe rinotamba pane server. Inokwevera zviri nyore pamusoro pe100 vataridzi kune mazhinji enzizi dzayo, uye neimwe nzira yakaganhura sevha yeruzhinji sezvo isingakwanise kutamba pane yakacheneswa server. Asi vazhinji vanoyerera vanotamba pane yakacheneswa server vakabatana neruzhinji server pane imwe nguva kana imwe.
Takaona Sykkuno achijoinha kushandura hunhu hwake Yuno kuita mupurisa. Buddha akashandurawo Mr. Lang kuita mupurisa pasevha yeruzhinji. Ramee, RatedEpicz, Blautoise, Burn uye zvimwe zvakawanda zvakare zvakatamba pane yeruzhinji server dzimwe nguva.
Verenga zvakare: Chii chinonzi torrents? Mashandire anoita rukova
7 Yakanakisa Pamhepo masevhisi Kune Vanhu Kunyora Zvinyorwa.
Iwo akanakisa GTA RP maseva uye maitiro ekubatana nawo